बर्षाको आ,क्रोश,सधै आ,न्दोलन गर्नु साटो भागरथीको न्या,यको लागी मिलेर ल,डौ,निर्मला र संझनालाई जस्तै नहोस (भिडियो सहित) – Wow Sansar
February 11, 2021 61
नायिका बर्षा शिवाकोटीले भागरथीको न्या,यकोलागी आफ्नो भावना राखेकी छिन तर उनले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि ब्य,ङग यसरि गरेकी छिन । हेरौ उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै “नारीलाई भगवान मानेर पूज्ने मेरो देशमा आज नारी स्वयं सुरक्षित छैनन्।
निर्मला र सम्झना जस्तै भागीरथीले पनि न्या,य पाउँदिनन् त ? के यति अ,सक्षम छ हाम्रो न्यायपालिका ? के यति क,म्जोर छ हाम्रो राज्य व्यवस्था, एउटा अप,राधिको पहिचन गरि, सजाय दिन नसक्ने ? के गरीबका लागि न्या,य त्यति महँगो भइसक्यो ?
तिम्रो र्यालीमा आएका जति मानिसले मेरा बहिनीहरुको लागि न्याय मागिदिए; फेरी अर्की बहिनी बल,त्कृत हुन्न थिइन् कि? तिम्रो आन्दोलनको नारा यदी बल,त्कार र बल,त्कारीको विरू,द्धमा लाग्ने गरेको भए, सायद मेरी बहिनिको बल,त्कारीले सजाय पाउँथ्याे कि?
हामी केका लागि ल,ड्दै छाैँ ? हाम्रो माग के हुनपर्ने हो ? नारा के हुनपर्ने हो ? आफै विचार गरौँ।अप,राधीको मनोबल झन बलियो बन्दै छ । पी,डित अझै पीँ,डामै छन्।
जनताको सरकार र संविधानबाट भराेसा उठ्ने बेला भइसक्याे। र देश झन झन अ,स्थिरता तर्फ जाँदैछ। कुर्सीको ल,डाइँ छाेड, सत्यको लागि ल,ड, जनाताको पक्षमा ल,ड ,जीत तिम्रै हुनेछ । न्या,य दिन अझ वि,लम्ब नहोस ।
Nextभागिरती भट्टको फेसबुकमा भेटियो नसोचेको यस्तो प्रमाण हेर्नुहोस भिडियो
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (2398)